» काठमाडौं महानगरपालिकाले फेरि ल्यायो दुई ब्रुमर, हट्ला त धुलो?
काठमाडौं महानगरपालिकाले फेरि ल्यायो दुई ब्रुमर, हट्ला त धुलो?
३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १४:०२
मकवानपुर । काठमाडौं महानगरपालिकाले एक महिनाभित्र दुई ब्रुमर थप्ने भएको छ।
दुई बु्रमरको प्रक्रियागत काम सिध्याएर एक महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान ढंगोलले जानकारी दिए।
सञ्चालनमा रहेका सातवटा ब्रुमरमा पाँचवटा इटालीबाट खरिद गरिएका ब्रुमर हुन् भने दुईवटा चीनले अनुदानमा दिएको हो। सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको अन्य दुई ब्रुमर पनि इटालीबाटै खरिद गरेर ल्याइएका हुन् । ‘नयाँ ब्रुमर थपिएपछि भित्रीसडक र सम्पदा क्षेत्रको धुलो हटाउन प्रयोग गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने। डंगोलका अनुसार नयाँ ब्रुमर सञ्चालनमा आएपछि कूल संख्या ९ वटा हुनेछन्।
सबै ब्रुमरले काम थालेपछि काठमाडौंलाई ८० प्रतिशत धुलोमुक्त बनाउने योजना रहेको डंगोलले सुनाए।
अहिले सबै ब्रुमर भिआइपी रुटमा सञ्चालनमा आएका र दुई नयाँ ब्रुमरलाई भित्रीसडक तथा सम्पदा क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले त्रिपुरेश्वर-एयरपोर्ट, त्रिपुरेश्वर-बाँसबारी, बालुवाटार प्रधानमन्त्री कार्यलय वरिपरि र कलंकी-महाराजगन्ज रुटमा ब्रुमरले काम गरिरहेका छन्।
चक्रपथका अत्यधिक धुलो उड्ने बाटोमा भने ब्रुमर नचलाइने डंगोलले बताए। ‘नयाँ ब्रुमर थपिए पनि चक्रपथ रुटको चाबहिल, गौशाला क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कच्ची बाटोको कारणले हामीले त्यहाँ ब्रुमर चलाउन सक्दैनौं। बाटो बनेपछि त्यो क्षेत्रमा पनि ब्रुमर चलाउनेछौं।’नेपालन्युज डटकमबाट